सानिमा इक्वीटी फण्डमा आवेदन दिने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहास्, कहाँबाट दिने आवेदन ? « हाम्रो ईकोनोमी
सानिमा इक्वीटी फण्डमा आवेदन दिने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुहास्, कहाँबाट दिने आवेदन ?
सानिमा क्यापिटलले मंसिर १२ गतेदेखि सानिमा इक्विटी फण्ड निष्कासनको आवेदन खुला गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १० रुपैयाँका दरले १० करोड २० लाख इकाईको फण्ड निष्कासन गरेको हो । लगानीकर्ताले प्रति इकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य रहेको यस योजनामा मंसिर १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन ।
यस योजनामा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुले आफ्नो बैंक खाता रहेको आस्वा सदस्य कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मार्फत आवेदन दिन सकिने छ । उक्त फण्डमा न्यूनतम १०० इकाई अर्थात एक हजार रुपैयाँदेखि दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ अर्थात २४ लाख इकाईसम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।